Kala Subba - Model Interview (Nepali)
Topic: Kala Subba - Model Interview (Nepali)
Author Topic: Kala Subba - Model Interview (Nepali) (Read 10609 times)
« on: October 03, 2009, 10:28:54 PM »
कला सुब्बा । हिट्स एफएमकी कार्यक्रम साचालिका । पूर्वमोडल तथा भिजे । हिट्स एफएममा सिनियर इभेन्ट अफिसर रहेकी कला 'मिस हङकङ नेपाल' समेत हुन् । सन् १९९६ को मिस नेपालमा मिस ट्यालेन्ट उपाधि जितेपछि उनले पछाडि फर्कनुपरेन । 'बेस्ट फिमेल मोडल २०००' समेत जितिसकेकी कला चाँडै टेलिभिजनमा आउने तर्खर गर्दैछिन् । नागरिकले उनीसँग गरेको कुराकानी ।
तपाईंको वालेटमा अहिले कति पैसा छ ?
साढे सात हजार र चानचुन । चाडबाडको बेला त्यसै पनि बढी रकम बोकिन्छ । सपिङ गर्न न्युरोड र किङ्स वे जानु छ । साँझचाहिँ साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने योजना छ ।
कुन बैंकको डेबिट कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
प्रायः लुम्बिनी बैंककै चलाउँछु । सरकारी बैंकमा पनि खाता खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि छ । अफिसले तलबचाहिँ ऐस डेभलपमेन्ट बैंकमा पठाउँछ । त्यहाँको पनि डेबिट कार्ड चलाउँछु ।
क्रेडिट कार्ड नि ?
लुम्बिनीकै छ । तर कार्ड जहीँतहीँ चल्दैन । त्यसैले पनि कार्डभन्दा पैसा नै बोक्न रुचाउँछु । कार्ड मात्र बोक्दा मन ढुक्क हुँदैन । हुन त हामी नेपालीलाई बानी नभएर पनि होला । बिस्तारै बानी पर्ला ।
कस्तो बेला क्रेडिट कार्डको प्रयोग हुन्छ ?
ठूलो खरिदारी गर्नुपर् यो भने । जस्तै टिभी पि्रुज गरगहना । पछिल्लो पटक हिराको औंठी किन्दा क्रेडिट कार्ड चलाएकी थिएँ । धेरै रकम बोकेर हिँड्नु सुरक्षित पनि हैन ।
देशको अर्थतन्त्र कस्तो लाग्छ ?
खै के भन्ने कतिपय ठूला कम्पनी बन्द भए । कतिले एकदमै राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । सामानको मूल्य चर्केको छ । दुई-चार हजारमा पहिले मनग्ये सपिङ हुन्थ्यो अहिले केही आउँदैन । तलब र आयचाहिँ उस्तै छ । यो हिसाबले पनि देशको अर्थतन्त्र खस्किएको भनेर बुझिन्छ । बजारमा स्तरीय सामान भेटिन मुस्किल छ । तैपनि बजारको भाउ बढेको बढ्यै छ । कसरी ठिक छ भन्ने ?
यसले तपाईंको आम्दानी र बचतमा कस्तो असर पारेको छ ?
एकदमै असर गरेको छ । आम्दानी उही छ तर बजारभाउ बढेकाले बचत कम छ । आवश्यकताभन्दा बढी खर्च नगर्दा पनि राम्रो बचत हुनसकेको छैन । दिनदिनै खर्च गर्नुअघि सोच्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ । यो हरेकको समस्या बन्दै गएको छ । यस्तै अवस्था अझ बढ्ने हो भने के होला घरकाहरुसँग हात फैलाउनु आफ्नो स्वाभिमानले पनि दिँदैन ।
आम्दानीको स्रोत ?
मुख्य स्रोत त हिट्स एफएम नै हो । स्टेज कार्यक्रममा पनि उद्घोषकको काम गर्छु । हरेक वर्ष त्यही सिलसिलामा विदेश जान्छु । अहिले पनि जाने कुरो चलिरहेको छ । त्यसबाहेक उद्घोषणको तालिम दिन्छु । कहिलेकाहीँ कोरियोग्राफी पनि गर्छु । कमाइको केही प्रतिशतचाहिँ ब्याजमा लगाउँछु ।
महिनामा कति कमाइ हुन्छ ?
चोखो तलबचाहिँ २५ हजार छ । त्यसबाहेक स्टेज कार्यक्रम तालिम र कोरियोग्राफीबाट फाटफुट कमिन्छ । विदेशमा कार्यक्रम उद्घोषण गर्ने अवसर पाउँदाचाहिँ राम्रै कमाइ हुन्छ । पाँच-छ वटा कार्यक्रमको झन्डै एकलाख जति हुन्छ । तर त्यस्तो अवसर सधैं पाइन्न ।
मासिक खर्च नि ?
जम्मा २० हजार जति पुग्छ । घरभाडामा ८ हजार । बाँकी खानपिनमा खर्च हुन्छ । स्कुटरमा तेल हाल्नै पर् यो । लुगाफाटा किन्नै पर् यो ।
लुक्स मेन्टेन गर्न कति खर्च हुन्छ ?
बेलाबेला त डगमगाउने गरी पनि खर्च गरेकी छु । पछिल्लो पटक कपाल एक्सटेन्सन गर्दा १५ हजार लागेको थियो । कतिपय अवस्थामा त सेभिङबाटै पनि खर्च गर्नुपर्छ । फेसियल कस्मेटिक र लुगाफाटामा ५ हजार जति खर्च हुन्छ ।
के-कति सम्पत्ति जोड्नुभएको छ ?
खासै छैन । कमाइ आफैलाई ठिक हुन्छ । बैंक ब्यालेन्स अलि-अलि छ । तीन वटा सवारी साधन र केही गरगहना । यत्ति नै हो अहिलेसम्म आफ्नो कमाइले जोडेको । पुर्खौली जग्गाजमिनचाहिँ धरान इटहरीलगायत पूर्वका केही ठाँउमा छ । शरीर भइन्जेल सम्पत्तिको मान्यता हुन्छ । आफ्नो लागि खर्च गर्न हिचकिचाउँदिनँ । त्यसैले पनि आफैले चाहिँ उति जोड्न सकिएको छैन ।
सेयर बजारमा लगानी छ कि ?
छैन । सोच्दैछु । साथीभाइहरु निक्कै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो गर्छन् । अलि राम्रोसँग बुझ्नुपर् यो भन्दैछु । नबुझी लगानी गर्दा जे पनि हुन सक्छ ।
इन्स्योरेन्स नि ?
लाइफ इन्स्योरेन्सचाहिँ अफिसले नै गरिदिएको छ । स्कुटरको आफैले गरेकी । यो हरेक नागरिकले गर्नुपर्ने कुरो हो । यसको फाइदा पनि छ । बचत त हुन्छ नै आपतकालीन स्थितिमा मद्दत पुग्छ ।
आर्थिकरुपले अभिभावकभन्दा राम्रो हैसियतमा छु जस्तो लाग्छ ?
छैन । उहाँहरु त धेरै माथि हुनुहुन्छ । मैले कमाएको आफैलाई ठिक हुन्छ । उहाँहरुले त घरपरिवार मात्र हैन आफन्तलाई समेत हेर्नुभएको छ । भुपु गोर्खा सैनिकको पेन्सन पनि बढेको छ । त्यसमाथि उहाँहरुको आफ्नै उद्योगसमेत छ । जे होस् ६ ८ हजारको परफ्युम म आफै किन्न सक्छु । उहाँहरुमा भर पर्नु पर्दैन । त्यसैमा गर्व लाग्छ ।
सरकारको आर्थिक नीतिले तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा कस्तो असर पारेको छ ?
असर पारेको छ । सरकारले करमा कडिकडाउ गर्न नसक्दा देशलाई मार परेको छ । त्यसमाथि उठेको करको सही सदुपयोग नहुँदा जनताले नै मार भोग्नुपरेको छ । गाडीको ट्याक्स तिर्छौं सडकको हालत हेर्नुस् । राजधानीकै खाल्टाखुल्टी टाल्न सकेको छैन सरकारले । विकट ठाँउमा गाडी पुर् याउने कहिले हेर्नुस् सपिङमा पनि नमागेसम्म बिल पाइँदैन । व्यापारीले कति कर छल्छन् होला यसरी नै लापरवाहीको स्थितिबाट देश गुजि्ररहने हो भने सबैलाई मर्का छ ।
अर्थमन्त्री भए कस्तो आर्थिक नीति लिनुहुन्थ्यो ?
धेरै सपिङ गर्ने भएकालॆ पनि होला खरिद गर्दा बिल दिनचाहिँ अनिवार्य गर्थें । करमा निगरानी राख्न दरिलो नीति बनाउँथेँ । यहाँ महँगा कपडा पसलमा पनि बिल दिने चलन छैन । अब भन्नुस् हामीबाट करको पैसा असुलेर सरकारलाई कति घाटा पारिरहेका छन् व्यापारीले । रेडियो टिभीमा करबारे त्यति जानकारी दिँदा पनि हामी आफै सचेत बन्न सकिरहेका छैनौं । कर छल्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
तपाईंलाई आर्थिक रुपमा गाह्रो पर्दाको समय ?
मिस नेपालमा भाग लिँदा । त्यो बेला मसँग पैसा थिएन । दिदीसँग २५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएकी थिएँ । त्यो ऋणले मलाई निक्कै पिरोलेको थियो । भाग्यवश मैले हङकङमा कार्यक्रमको लागि जाने अवसर पाएँ । जसवापत ३५ हजार रुपैयाँ पाएकी थिएँ । फर्कनासाथ मैले ऋण चुक्ता गरेँ ।
पैसालाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
पैसा आधारभूत आवश्यकता हो तर जिन्दगी हैन । पैसाले इच्छा धान्न सकिन्छ सपना किन्न सकिँदैन । पैसा ठूलो चिज हो तर सबथोक हैन ।